U-Polina Gagarina wembula igama lomntanakhe, isithombe
Yilokho ongakushona ngokuthi ungumhlanganyeli wangempela! Ngesikhathi abalingani bakhe be-showbiz bejabula ukuthumela izithombe "ezikhulelwe" ezincane zabo, uPolina Gagarina wenqaba ukuphawula izindaba zakamuva ngokukhulelwa kwakhe kuze kube yilapho ingane yakhe izalwa. Ngaphezu kwalokho, lo mculi uthukuthelele abalandeli bakhe lapho bexoxa ngalesi sihloko ku-Instagram.
Ukufihla okunjalo kubangele imibuzo eminingi phakathi kwabasebenzisi be-intanethi abangakwazi ukuyiqonda - uPolina Gagarina wazala ingane yesibili noma cha, noma engakakhulelwa.
Ngemuva komunye usuku ku-Instagram sikaPolina Gagarina wavela ngesithombe sakhe ngesisu esikhulu, abasebenzisi benethiwekhi banquma ukuthi umculi usuvele esebelethile. Manje umbuzo omusha wemibuzo ugcwele ikhasi likaGagarina ku-Instagram: ngubani uPolina Gagarin owabeletha lapho ebeletha, umfana noma intombazane ... Ekhumbula ukuthi umculi unenkani ngenkani izinyanga eziyisishiyagalolunye, akekho olindelwe ukuthula kwakhe. Kodwa-ke, lo mculi wajabula ngokungalindelekile abalandeli bakhe abazinikele ngokushicilela isithombe sokuqala nengane, bevuma ukuthi babenentombazane noDmitry Iskhakov.
U-Polina Gagarina, ujabulela umama, utshele ukuthi wabiza kanjani indodakazi yakhe
Kodwa lokhu akuzange kuphele ngokuvuma ngokucacile komculi. Ezinsukwini ezimbili ezedlule, uPolina Gagarina wabonisa isithombe esisha nendodakazi yakhe. Isithombe sibonisa ukuhamba kokuqala nengane. Le nkanyezi yatshela ngokucacile ukuthi i-microblogging yakhe iyamkhathaza:
Angikwazi ukubona ngokwanele futhi ngiphefumula! 💕 Lona uthando olungenamkhawulo olungenamkhawulo!
I-fallovers yashiya "ukuthandwa" okungaphezu kuka-300 000 ngaphansi kwesithombe, futhi ekuxoxweni, kanye nokuhalalisela, kwaphakanyiswa umbuzo owodwa: uPolina Gagarina wambiza kanjani indodakazi yakhe. Umculi akazange ahlasele abalandeli isikhathi eside futhi usememezele igama lomntwana ngobusuku obudlule, ngokuthumele isithombe esisha. Isithombe sibonisa uDmitry Iskhakov ngezimbali, emi enhliziyweni eqoshwe kwi-asphalt, enkabeni yayo ebhaliwe ngokuthi "Mia".
Yileli gama uPauline Gagarin nomyeni wakhe bakhetha indodakazi yabo:
Namuhla, ubaba ojabule wathola isitifiketi sokuzalwa. Ukuhlangabezana Mia Dmitrievna Iskhakova! Jabulela umntwana! Ezweni azikho amagama anjalo okumele azitshele ngothando lwethu nothando lwakho, intombazane yethu
Qaphela ukuthi igama elingavamile likaMia lithandwa ngabantu abahlala ekhaya. Eminyakeni emibili eyedlule uPavel Priluchny no-Agata Mutseniets banikeze leli gama indodakazi yabo, futhi kungekudala indodakazi yabo yesithathu, uGigan no-Oksana Samoilova, ibizwa ngaleyo ndlela.
UStas Pieha uxolise esidlangalaleni kubantu base-Ukraine, ividiyo
Indlela izidumi zaseRussia ezigubha ngayo i-Easter, isithombe
UNastasya Samburskaya washada: isithombe sokuqala somshado
UNatasha Koroleva wayevinjelwe ukungena e-Ukraine
U-Stanislav Sadalsky wavula iqiniso mayelana nobuzwe obubili eMaksakova
U-Eugenia Tsyganova, owayengumyeni wakhe, washiya izingane kuye ugogo wakhe futhi wabuyela esiteji sezemidlalo
I-birch ijusi ku-cosmetology
Kulula kangakanani futhi okusheshayo kungaba ukukhwehlela ukwelashwa ekhaya?
Izimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo ku-gynecologist. Ingxenye 1
Amabhisikidi we-chocolate nge ukhilimu omuncu
Uhambo lokuqala ukuya ekamu labantwana
Izakhiwo zokwelapha zamafutha enhlanzi
Ngokwezibalo ezitholakalayo ukwanda kwenani lokuzalwa uMnyango WezeMpilo Nokuthuthukiswa Komphakathi weRussia Federation ulindele enye irekhodi lokuzalwa eRussia kulo nyaka
Indlela yokukhetha umshini wokuhlanza ofanele
Ukucindezela umzimba ngomanzi abandayo
Yini okufanele ingane ikwazi ukuyenza ezinyangeni ezingu-4
Ushaya ama-shrimps namasoseji
Iresiphi ye-chips chips
Massage yaseBrazil kanye nezinzuzo zayo kubalo
Izimfihlo ezingu-5 ze-smokey ephelele zamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, aluhlaza nensundu
Izingxenye zomshado ojabulisayo